iHelp 1.0 - OMG GPS Tracking Keychain, tsy tantera-drano, tsy misy mihetsika ary fahitana ny fahalavoana (Zokiolona miaraka amin'ny Dementia) [OMGGPS10D] | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Fa maninona isika? Fandraisana maimaim-poana amin'ny App Tracking - Android, IOS & Web-base Portal (Maimaimpoana Famandrihana mandritra ny androm-piainany ho an'ny mpampiasa an-trano - Tsy andoavam-bola isam-bolana / isan-taona).
IHelp Adult GPS Tracker Device afaka manara-maso ny satan'ireo zokiolona amin'ny fotoana ilana azy, rehefa misy ny fahalavoana, manampy aho dia afaka manosika SMS avy hatrany ary miantso ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana 5, mba hahafahana manome fanampiana avy hatrany.
The IHelp Adult GPS Tracker Device manampy ireo fianakaviana sy ny fijalian'ny zokiolona amin'ny olana mifandraika amin'ny fahatsiarovana. Raha manana ray aman-dreny na olona ao amin'ny fianakavianao ianao izay mampiseho lamina mifanaraka amin'ny fitondran-tena manadino, na mety hiteraka fiainana mahaleotena, IHelp Adult GPS Tracker Device dia hahatonga ny fiainanao ho mora kokoa ary tsy dia mitebiteby. manampy aho dia tena sarobidy satria hampitandrina anao na hanoratra raha olon-dehibe iray:
* Mandosira na very ao amin'ny toerana mahazatra na tsy mahazatra.
* Safe na ao anatiny na manodidina ny tranony.
* GPS rafitra fitsikilovana dia afaka manome antoka, fiarovana, ary fiarovana izay hahatonga ny lalana sarotra ho fahatsiarovana-fahatsapana mora kokoa sy tsy dia mampatahotra loatra ho an'ireo rehetra mandray anjara.
Raha mahatsiaro tena ny zokiolona, ​​dia afaka manery ny Call Button izy mandritra ny telo segondra mba hiantso ny antso an-telefaona. manampy aho Adult GPS Tracker Device dia mandefa SMS avy amin'ny tamba-jotra Wireless. manampy aho is small, elegant and portable. Mpanolo-tena akaiky ho an'ny zokiolona izany.
iHelp - Fitaovana Tracker GPS ho an'ny olon-dehibe
Ny Loholona dia afaka mifandray amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana mandritra ny vonjy taitra miaraka amin'ny fanontana bokotra iray.
Mahafinaritra ny mitafy / mitondra, tsotra sy azo ampiharina
Mobile Apps ho an'ny fanaraha-maso
Fampiharana tsotra, hery endri-javatra
3 samihafa loko
1. Ny tontolon'ny 3G (WCDMA) kely indrindra indrindra / GPS tracker.
2. Ny toeram-pivarotana docking dia manome fomba hafa entina hampiasaina ary hampandeha azy ho haingana sy mora ampiasaina.
3. Ny mandeha amin'ny fotoana marina amin'ny GPS satelita.
4. Fijerena amin'ny RF (tsy misy ankehitriny)
5. AGPS, TTFF amin'ny 30 segondra (10 segondra ho an'ny GPRS).
6. Manaova fanamafisam-peo ho an'ny ankizy sy zokiolona, ​​manam-paharetana.
7. Mpandrindra vibration.
8. Miaraka amin'ny batterie 900 mah lithium.
9. Fitaovan'ny G-sensor 3D ho an'ny fihetseham-po, fampihorohoroana sy fahatapahana herinaratra.
11. Fifandraisana am-peo amin'ny feo roa.
12. Data logging: toerana 60000.
13. GPRS-jery ny angon-drakitra miverimberina
14. Firoboroboan'ny fiarovana amin'ny rivotra.
15. Hamaly ny rohy misy ny sarintany misy ankehitriny.
16. SOS button button.
17. Fanairana geo-zone, Alzera mahery.
18. Hetsika fanairana.
Module WCDMA: Telit UL865 (900 / 2100MHZ sy 850 / 1900mhz), 3G (WCDMA)
* Avaratra Amerika Avaratra:
* Fifandraisana: Embedded TCP / IP amin'ny GPRS class 10, hafatra SMS, Feo
* Antenna: Built in antenna FPC
* GPS kapila: uBlox 0702 (Support AGPS)
* Frequency receiver: 1575.42 MHz
* Manomboka ny katsaka: manodidina ny 32S, ny karazana TTFF (95%)
* Feno fanairana: manodidina 32S, karazana TTFF (95%)
* Hotomboka: approx: 1S, TTFF (95%)
* Antenna: Antenna en cérien
Fiatrehana lamin'asa: DC5V
Battery backup: Rechargeable, 3.7V, 900mAh (Li-Poly)
Fitaovana: Micro USB connectors
SIM karatra: karatra Micro SIM
Flash Memory: Built in memory of 8MB
Fandaniam-potoana ankehitriny: 40 ~ 60mAh
Dieny izao ny fanjifana: 5 ~ 10mAh (GPS miala)
Operating Temperature: -20 ° C to + 80 ° C
Toby fandrefesana: -40 ° C hatramin'ny + 85 ° C
Fiantohana: 5% -95% tsy fandroana
3G GPS Keychain - taratasy fanamarinana
* Mandrindra ny Volana 6
* Fampiofanana maimaim-poana (Self Collection)
* FREE Device Setup (singa samirery)
38378 Total Views 8 Views Today
iHelp 2.0 - Keychain Tracking OMG GPS, tantera-drano,…
Tracker an'ny OMG GPS Pendant (Dementia Elderly & Kids)…
Fitaovana fanaraha-maso manokana - tsy tantera-drano [OMGGPS09D] -…
GPS029W - OMG Waterproof GPS Watch For ankizy